Wulite Ụwa Ka Mma na Paxful Alliance
Nnọọ na Paxful Alliance Ka anyị wulite ụwa ka mma ọnụ
Bụrụ akụkụ nke usoro okike nke na enyere gị aka iwulite ike gị, ma chọta ụlọ ọrụ nwere mmụọ ga eso gị kekọrịta ebumnuche gị ka gị na ha rụkọọ ọrụ. Mee ka akụ gị jupụta, kekọrịta ọhụụ gị, rụọ ọrụ ọnụ, ma wuo nnukwu ihe maka obodo gị.
Ka anyị rụkọọ ọrụ ọnụ
Gini mere iji sonye na Mmekọrịta Paxful?
Anyị na akpọkọta nzukọ na ndị mmadụ n'otu n'otu site na ndụ niile. Ụlọ ọrụ, ndị mmadu, na ndị n’ebere abaghi ​​uru nwekorita na ebumnuche ha na ebum n'ụlọ ha. Enwere ọtụtụ ihe ị ga enweta site na mmekọrịta a:
Choo ndị ozo nwere obi oma ma metu ndụ ndị ozo aka na ọrụndị mmadu n’eme nke ị nwere mmasi maka ya.
Gbasaa okwu gị
Imekota na mkpọsa PR ma gbasaa okwu banyere aha ahịa gị karịa ka ọ dị na mbụ.
Zisa ozi ọma ma kuziere
Mepụta mmata nke ngwaahịa ma ọ bụ azụmaahịa gị na mpaghara ọhụrụ ma bụrụ onye mbute n'ihu ime amụma gbasara ọrụ gị.
Guzosie ike ị megide nsogbu
Bịakọta ọnụ megide asọmpi nkịtị ma hapụ ha na enyo anya azụ gị. Ị dị n’otu bụ ike.
Nyagharịa iwu mpaghara
Chọta ezigbo enyemaka iji mee ka azụmahịa gị na erubere iwu obodo isi na ahịa ọhụrụ.
Mee ka ndị na ege gị ntị gbasapu
Gaa ụwa niile, tinye ahịa ọhụrụ, ma nweta ohere maka njirimara ọrụ ka ibu maka ngwaahịa ma ọ bụ ọrụ gị.
#BuiltWithBitcoin — Mmekọrịta maka ọdịmma mmadụ
Paxful bidoro ọrụ ebere a na 2017 iji gosi na Bitcoin nwere ikike inyere ndị mmadụ aka gburugburu ụwa. Ọ bụ ihe akaebe maka uru ụwa bara uru nke cryptocurrency igafe nkwenye nkịtị. Site na njikọ a, anyị na agba ndị ọrụ cryptocurrency ume itinyekwu aka na ọrụ enyemaka mmadụ.
Ụlọ akwụkwọ dị n'Africa
Na mmekorita ya na ZamZam Water, anyi mechara wuo ulo akwukwo na ulo akwukwo nke isi na obodo Kasebigege, Rwanda. Ọzọkwa, iwu nke ụlọ akwụkwọ agụmakwụkwọ maka ụmụaka dị afọ 3 ruo 6 na aga n'ihu na Mba Machakos, Kenya.
Akwụkwọ maka ọba akwụkwọ
Site n'ịgụ akwụkwọ bụ akụkụ dị mkpa nke programụ Educare, ejiri onyinye Paxful zụta akwụkwọ maka obere ọba akwụkwọ na ebe dị iche iche. Onyinye ahụ nyekwara aka iziga ngwugwu nri nye ọtụtụ puku ezinụlọ na Western Cape na mpaghara ndị ọzọ n'oge ọrịa COVID-19.
Dị ka akụkụ nke # BuiltWithBitcoin's Africa Fund, Olileanya Na enwu maka Ọha Obodo chịkọtara nkata nri 333 maka ihe karịrị mmadụ 1500, ihe karịrị 6,000 mkpuchi ihu maka ndị ọrụ na aga n'ihu ọrụ, ma nyefee mmiri dị ọcha na ebe ịsacha aka 60 na Kibera maka otu ọnwa.
Chọta njikọ gị
Ihe niile ahụ dị mma, mana amaghị ebe ị ga aba? Ma ị nọ na fintech ma ọ bụ ọrụ ebere, Paxful Alliance bụ maka gị. Lee iyi dị iche iche maka mmekọrịta na uru.
Nyere aka kụziere obodo banyere usoro ọhụụ na crypto na teknụzụ
Ulọ akụ na ego
Gbanwee ụwa nke ego site na echiche ọhụrụ gị ma wuo nnukwu ngwaahịa ga emetụta ọdịnihu nke ego.
Mgbasa ozi & PR
Gbasaa okwu gị na ụwa niile, jiri ozi ziri ezi, rute ebe dị anya karịa ka ọ dịbu
Nwee nsogbu dị iche iche na oghere crypto, chọpụta ahịa na ohere ọhụụ
Ntụrụndụ na Egwuregwu
Duru ngwugwu nke egwuregwu na ntụrụndụ nke crypto. Mee ka echiche egwuregwu gị niile dị jụụ dịrị ndụ.
Ihe ọ bụla ọzọ ị na achọ imekọ ihe ọnụ. Ị maghị ndị ihe echiche gị ga akpali!
Dị njikere maka mmaba? Ka anyị rụkọọ ọrụ ọnụ